musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Nigeria Breaking News » Qatar Airways inopeta kaviri ndege dzeLagos
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • nhau • Nigeria Breaking News • Qatar Kuputsa Nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Qatar Airways 'network ichawedzera kusvika gumi nemana vhiki nendege kuenda kuMurtala Muhammed International Airport, kutanga 14 Chikunguru.
Qatar Airways yakawedzera basa rayo kunzvimbo yemari yeNigeria.
Ndege dzeLagos dzinoshandiswa neBoeing 787 Dreamliner ine zvigaro makumi maviri nezviviri muBusiness Class uye zvigaro 22 muEconomy Class.
Uku kuwanda kwenzvimbo kuchapa vafambi kunyanyisa kuchinjika.
Mukupindura kudiwa kwakanyanya, Qatar Airways yawedzera basa rayo kunzvimbo yemari yeNigeria, Lagos, kuenda nendege mbiri dzezuva nezuva kutanga kubva musi wa1 Chikunguru 2021. Inoshandiswa nevechizvino-zvino Boeing 787 Dreamliner ine zvigaro makumi maviri nezviviri muBusiness Class uye zvigaro 22 muEconomy Class. ipa vafambi kunyanyisa kuchinjika kuti vafambe mubhodhi nematanho epamusoro ehutsanana uye kunakidzwa neruzivo rwekufamba musiri paHamad International Airport.
Nekuwedzera kweCôte d'Ivoire musi wa16 Chikumi senzvimbo yechina itsva yekuenda Africa kubva pakatanga denda iri, Qatar Airways parizvino inoshanda kupfuura 100 ndege dzevhiki kuenda kunzvimbo 27 muAfrica. Qatar Airways inoshandawo nendege nhatu dzevhiki kubva Abuja, ichibatanidza vamwe vatakuri kubva kuNigeria kuenda kunhandare yendege iri kuwedzera nekukurumidza kusvika zvino kupfuura nzvimbo zana nemakumi mana.
Qatar Airways Mutevedzeri weMutungamiriri, Africa VaHendrik Du Preez vakati: "Nigeria musika wakakosha kwazvo kwatiri uye ticharamba tichipa dzimwe nzira dzekufamba nekubatana zvisina musono kunetiweki huru yenzvimbo dzekuAsia-Pacific, Europe, Middle East neNorth America.
"Pashure pegore chete rekumutsirazve nendege kuenda kuLagos nekutanga kuenda kuAbuja, zvichitevera matambudziko akaiswa nedenda iri, chiratidzo chekusasimba kwenzvimbo yeAfrica yatave kuwedzera nguva yedu kuLagos. "Tinotarisira kugamuchira vatambi vari muchikepe kuti tinakirwe nemutsa uye nemabasa epasi rose."
Qatar Airways Company QCSC, inoshandiswa seQatar Airways, ndiyo mutevedzeri wemureza wehurumende weKatar.